နိုင်ငံတော်ပိုင် အဆောက်အအုံနှင့် မြေကွက်များအား နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော်ပိုင် အဆောက်အအုံနှင့် မြေကွက်များအား နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရ??
ရန်ကုန်၊ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံနှင့် မြေကွက်များအား နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရယူထား ကြပြီး ယနေ့အထိ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်းမရှိသော နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံနှင့် မြေကွက်များအား နိုင်ငံပိုင်အဖြစ် ပြန်လည်သိမ်းဆည်းရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသို့ တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကို လွှတ်တော်တွင်း အတည် ပြုကာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါတိုက်တွန်းအဆိုအား ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ပဉ္စမပုံမှန်အစည်းအဝေး(နဝမနေ့)တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေးက တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”နိုင်ငံပိုင် မြေကွက်များ၊ အဆောက်အအုံများကို ရယူစဉ်ကလည်း ဈေးနှုန်းမှန် မဟုတ်ဘဲ လျော့နည်းလွန်းသောဈေးနှုန်းများဖြင့် မတရား လက်သိပ်ထိုးရယူထားပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းလည်း မရှိသဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် ရသင့်ရထိုက်သောအခွန်အခများနှင့် အခြားဝင်ငွေအရပ်ရပ်များ နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါ်ပေါက်မှုများ ဆုံးရှုံးနေသဖြင့် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအတွက် လည်း များစွာနစ်နာခဲ့ရပါသည်”ဟု ဦးလှဌေးက လွှတ်တော်အတွင်း ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ မြို့နယ်အသီးသီးမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပိုင်အဆောက်အအုံတွေ၊ မြေကွက်တွေဟာ ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့် ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိတော့တာတွေကိုဘဲ တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးဟာ ငွေရှင်ကြေးရှင်များလက်အတွင်းသို့ ကျရောက်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီက အဆိုပါအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ထောက်ခံဆွေးနွေးသွားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် စက်မှုဇုန်များမှ မြေယာများအပြင် လယ်သမားများ၏ လယ်မြေများအား နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ရယူသုံးစွဲခံနေရခြင်းကြောင့် လယ်ယာမြေများ ပျောက်ဆုံးကာ လယ်ယာထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများ လျော့နည်းလာမည့်အန္တရာယ်နှင့် စိုးရိမ်စရာအခြေအနေများကို မြင်တွေ့ရကြောင်း ဦးညီညီက ဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လျှပ်စစ်စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်မှ လက်ခံဆွေးနွေးရန် သဘောတူကြောင်း သဘောထားပြောကြားခဲ့ပြီး လွှတ်တော်၏ သဘောထားရယူခဲ့သည်။ သဘောထားရယူရာတွင် ကန့်ကွက်သူမရှိသည့်အတွက် ၎င်းအဆိုကို အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင် လွှတ်တော် တွင်း ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း လွှတ်တော်တွင် မေးခွန်းများ အမေးများခြင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းခြင်းကို ဖော်ြ
ယုဇန ဥယျာဉ်မြို့တော်ရှိ လမ်းအချို့တွင် ရေပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ပြည်သူများ အခက
ဒဏ်ရာ ထပ်မံရခဲ့ချိန်တွင် နှစ်ရက်ခန့် ငိုကြွေးမိခဲ့ဟု နေမာ ဖွင့်ဟ